၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာတိုးမြင့်ခြင်းသည်မိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပြproblemsနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မိုးခေါင်ခြင်း၊ အပူလှိုင်းနှင့်ရေကြီးခြင်းများအပါအ ၀ င်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ပိုစဒမ်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအင်စတီကျုမှသိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။သဘာဝတရားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု'ငါတို့သိတယ် အလွန်မြင့်မားသောရာသီဥတုအခြေအနေများကိုပိုမိုကြာရှည်ခံစေရန်နှင့်ပိုမိုပြင်းထန်စေရန်အတွက် ၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တိုးလာသည်.
သုတေသီများသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ၁၉၆၀ မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းမြေကြီးပေါ်ရှိအပူချိန်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေအလွန်အမင်းပြင်းထန်လာရန်အတွက် ၀.၅ºC သာမြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ပို။ ပင်။ ဥပမာ, ကမ္ဘာ၏လေးပုံတစ်ပုံတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု ၁၀% နီးပါးမြင့်တက်ခဲ့သည်စဉ် အပူလှိုင်းများသည်မြေareasရိယာ၏ထက်ဝက်တွင်ပျမ်းမျှတစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်သည်.
ဒီအပြောင်းအလဲများ သဘာဝအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကျော်လွန်သွားပါ။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း၊ မြေ၊ ပင်လယ်နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများကအခြေအနေများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ထိုအရာကိုသတိမထားမိဘဲကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုအန္တရာယ်ရှိစေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သူများသူတို့ကိုယ်သူတို့ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ရိတ်သိမ်းမှုများ၊ သောက်ရေနှင့်နိမ့်ကျသောအပူလှိုင်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်.
ထိုဖော်ပြချက်မဟုတ်ပါဘူး သန္တာကျောက်တန်းများအပြင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်သောမြို့သားအားလုံးသည်အလွန်အမင်းခြိမ်းခြောက်ခံရသည်။ ပူပြင်းပြီးအက်ဆစ်ပြင်းထန်သောပင်လယ်သည်သန္တာကျောက်တန်းအိမ်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ထုံးကျောက်ထွန်းရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာတိုးလာခြင်းသည်မိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည်
Globular Rays နှင့် Real Video များ